पूर्वमा अस्ताए मदन बा - TGuff
पूर्वमा अस्ताए मदन बा
Tue May 26 0	Comments
जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सेवामा समर्पित गरे, गृहस्थी त्यागेनन् तर सादगी ब्रह्मचारी सन्तको जीवन बिताए। उनको जीवनको सार भन्नु नै सबै तहका मानिसलाई समान ढंगले दुःखबाट आनन्दतिर र बन्धनबाट स्वतन्त्रतातिरको बाटो देखाउनु रह्यो।
नेपाल र अन्य धेरै देशका भिक्षु एवं गृहस्थ साधकहरुका प्रेरणा स्रोत उनै विपश्यना आचार्य मदन तुलाधरको ७१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। वि.सं. २००६ मंसिर ११ मा असनमा जन्मिएका उनी युवा कालमै बुद्ध विद्यातर्फ आकर्षित भएका थिए।
उनको अध्यात्म यात्राका मार्गदर्शक विश्व विपश्यना आचार्य सत्य नारायण गोयन्का हुन्। बुद्ध जन्मको २ हजार ५ सय वर्षपछि सन् १९८१ मा बुद्ध विद्या बोकेर गोयन्का बुद्ध जन्मभूमि नेपाल प्रवेश गर्दा यहाँको वास्तविकता फरक थियो। नेपालले बुद्धलाई जन्माएको थियो तर उनको विद्या के हो, कसरी अभ्यास गरिन्छ, असर के हुन्छ, पत्तो थिएन। भिक्षुका एक दुई बिहारबाहेक अन्त यो पहिलै लोप भइसकेको थियो। यो त्यति बेलाको कुरा हो जतिबेला विपश्यना गृहस्थहरुका लागि होइन केवल भिक्षुहरुका लागि हो भन्ने भ्रम व्याप्त थियो।
नेपाल आएका आचार्य गोयन्काले स्वम्भुस्थित आनन्दकुटी बिहारमा पहिलो विपश्यना शिविर सञ्चालन गरे। नेपालमा ऊ बा खिन परम्पराअनुसार सञ्चालन भएको त्यो नै पहिलो विपश्यना ध्यान शिविर थियो। मदन तुलाधर त्यही शिविरमा सहभागी हुन चाहन्थे।
‘तर २५० निर्धारित सिट पहिलै बुक्ड भइसकेकाले त्यहाँ उहाँले अवसर पाउनु भएन। त्यसपछि एक्लै भारतको सिमला पुगेर पहिलो औपचारिक दश दिने शिविर लिनुभयो’, विपश्यनाका पुराना आचार्य आनन्द शाक्य भन्छन्, ‘अनौपचारिक रुपमा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामी ध्यान बस्ने गर्थ्याैं।’
नेपालमा विपश्यना भित्र्याउने श्रेय दुई व्यापारीहरु यदुकुमार सिद्धी र मणिहर्ष ज्योतीलाई जान्छ। त्यसपछि यो ध्यानको विकास, विस्तारमा जीवन समर्पित गर्ने पहिलो चरणका थोरै आचार्यहरुमध्ये तुलाधर एक जना हुन्। सन् १९८२ मा स्थापना भएको धम्मश्रृङ्ग विस्तार हुँदै जाँदा उनले आफ्नो अन्तर्मनको यात्रा पुष्ट गर्दै लगे। भनिन्छ, आफू नजिक आइरहेका मानिसको स्थिति उनी पहिलै थाहा पाउन सक्थे। जतिसुकै अप्ठ्यारा बोकेर उनी समक्ष पुगे पनि समाधान पहिल्यादिन्थे। साधकहरु उनलाई आदरपूर्वक ‘मदन बा’, ‘मदन गुरु बा’ नामले सम्बोधन गर्थे। स्नेह र मैत्रीपूर्ण व्यवहारका कारण मदन बा युवाबीच विशेष प्रिय थिए। हाँसोठट्टाको राम्रो चेत भएका उनी चियाका पारखी थिए। भेट गर्न जानेहरुलाई थरिथरि चिया चखाउँथे।
‘मान्छेको बुझाइको स्तर हेरेर उहाँले डिल गर्नुहुन्थ्यो। एक पटक मात्र बोलेको मान्छेलाई दशौं वर्षपछि भेट्दा समेत नामले नै बोलाउनु हुन्थ्यो। यस्तो क्षमता कमैमा हुने गर्छ’, आचार्य शाक्य भन्छन्, ‘एक पटक उहाँसँग साक्षात्कार गरेका साधक साधिका उहाँका प्रशंसक बनेर फर्किन्थे।’
आचार्य गोयन्काको जीवनकालमा विश्वभरि १७५ वटा ध्यान केन्द्र निर्माण भए। तीमध्ये इगतपुरी (भारत) बाहेक उनले सबैभन्दा बढी समय बिताएको केन्द्र मुहान पोखरीस्थित धम्मश्रृङ्ग हो। विपश्यनाका कतिपय पुस्तक आचार्य गोयन्काले यही केन्द्रमा लेखेका छन्। आफ्ना गुरु लामो समय काठमाडौंमा रहँदा उनले सम्पूर्ण जीवन अध्यात्मतर्फ समर्पित गरिसकेका थिए। यो सन् १९८० को अन्त्यदेखि ९० दशकको कुरा हो। त्यसपछि मदन बाले सम्पूर्ण जीवन नै ध्यानसँग सम्बन्धित काममा समर्पित गरे। त्यसबापत केही लिएनन्, दिए मात्रै। कतिसम्म भने केन्द्रको सबै काम पूरा गरेर मध्यराति आफ्नै घरमा बास बस्न फर्किन्थे। पछिल्लो समय उनी धम्मश्रृङ्ग नजिकै पुर्ख्याैली सम्पत्तिबाट खरिद गरेको घरमा बस्दै आएका थिए। शारीरिक आरामको लागि उनी छोटो समय मात्र सुत्थे, धेरै समय ध्यान र सेवामा बिताउँथे।
नेपालको पहिलो विपश्यना ध्यान केन्द्र धम्मश्रृङ्ग व्यवस्थापनमा उनको महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। सधैँ नै करिब २ सय साधक ध्यानमा रहने केन्द्रमा सेवकको खाँचो परिरहन्छ। सारै अप्ठ्यारो परे उनी आफैँ समाधान निकाल्न अग्रसर हुन्थे। त्यसका लागि उनले पुराना साधकहरुको एउटा सर्कल नै तयार पारेका थिए। उनीहरूमा सम्मान डिग्री यो तहमा थियो कि मदन बाले प्रस्ताव गर्दा कसैले ‘हुन्न’ भन्दैनथ्यो।
विपश्यना आचार्य एवं उद्योगपति डा.रुप ज्योती उनले एउटा उदाहरणीय जीवन बाँचेको बताउँछन्। ‘मदन दाईले जसरी आफ्नो अन्तिम समयसम्म धर्म सेवा गर्नुभयो त्यो हाम्रा लागि प्रेरक छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसबाट हामी सबैले प्ररेणा लिनु पर्दछ।’
फिक्कलको ध्यान केन्द्रबाट सूर्योदयको सुनाैलो दृश्य देखिन्छ। त्यही भएरै केन्द्रको नामै ‘धम्म सुरियो’ राखिएको छ। धेरै साधकको मनमा बस्न सफल मदन बा सूर्यले बिहानै स्पर्श गर्ने त्यहीँबाट अस्ताए। प्राण छोड्ने अन्तिम समयसम्म पनि उनी सेवामै संलग्न रहे। भदाै ३१ मा काठमाडाैंबाट इलाम पुग्दा त्यहाँ १० दिने शिविर सञ्चालन भइरहेको थियो। उनले त्यहाँ अन्तिम श्वास नत्यागेसम्मै काम गरे। ३ असोजमा १० औं दिनको मंगल मैत्रीमा सहभागी भए। केन्द्र विस्तारका अन्य काम गरे। राति सेविकाहरुलाई निर्देशन दिए। ११ औं दिन हुने अन्तिम मैत्रीको केही भाग प्रवचन समेत सुने। त्यसपछि रात्री आरामका लागि गएका उनी फर्किएनन्। निवासमै सहज, शान्तपूर्वक प्राण त्यागे।
मदन बाको निधनले हजारौं विपश्यना साधक स्तब्ध भएका छन्।
आजीवन अविवाहित उनको शव हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएर शनिबार शोभा भगवतीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। घाटमा भेला भएका पुराना साधकले एक घन्टा सामूहिक साधना गरी उनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन्। उनले जीवनमा सबैभन्दा धेरै समय बिताएको मुहानपोखरीस्थित धम्मश्रृङ्गमा असोज ११ गते शनिबार बिहान ८ देखि ९ बजेसम्म सामूहिक साधना आयोजना गरी उनीप्रति मंगल मैत्री गरिँदैछ।
के हो विपश्यना?
विपश्यना साधना स्वनिरीक्षणद्वारा चित्तशुद्धी गर्ने ध्यान विधि हो। यसको अभ्यासले मान्छेमा दुःख हट्दै जान्छ। मन, मस्तिष्कमा द्वेष, घृणा कम भएर करुणा, प्रेमले भरिन्छ। विपश्यना एउटा गैरसाम्प्रदायिक ध्यान विधि हो। यसले कहीँ कतै साम्प्रदायिक घेरामा बाँध्दैन। २ हजार ५ सय वर्षअघि नै लोप भइसकेको यो ध्यान पद्धतिलाई बुद्धले खोज गरी विश्वभर फैलाएका थिए। पछिल्लो समय सत्यनारायण गोयन्काले यसलाई फेरि विश्वव्यापी बनाएका हुन्।
विपश्यना सिक्न योग्यताप्राप्त आचार्यको सानिध्यमा १० दिनको आवासीय शिविरमा सहभागी हुनु पर्दछ। शिविर अवधिमा लेखपढ, पूजापाठ र अन्य क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। सहसाधकसँग कुराकानी गर्न हुँदैन। साधनासम्बन्धी वा भौतिक समस्याबारे आचार्य वा सेवकसँग कुराकानी गर्न भने रोक लगाइँदैन। विपश्यना सिकाइका तीन चरण छन्– शील, समाधि र प्रज्ञा। शील पालनाले मन शान्त बनाउँछ, अगाडिको काम सजिलो हुन्छ। समाधिमा ‘आनापान’ ध्यान सिकाइन्छ। यसले सास आइरहेको र गइरहेको महसुस गर्न सिकाउँछ। तेस्रो चरणमा साधकले आफूभित्र प्रज्ञा जगाएर शरीर चित्त दुवै तहका बिकारहरुलाई आश्चर्यजनक गहिराइबाट निकाल्छ। मुहानपोखरीस्थित धर्मश्रृङ्ग, कीर्तिपुरको धम्मकित्तिसहित देशभरिका १० ठाउँमा सञ्चालित ध्यान केन्द्रहरुमा नयाँ साधहरुकलाई १० दिने र पुराना साधकलाई ९ दिने सतिपठ्ठानलगायत २०, ३० र ४५ दिने शिविर सञ्चालन हुने गर्छन्। (नेपालखबरमा २२ सेप्टेम्बर २०१९मा प्रकाशित)
Spirituality kathmandu meditation vipassana